WowBox နဲ႔ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း
WowBox နဲ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ခြင်း
ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ ဘာလေးညာလေးတွေကို ခုဆို WowBox ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်း (mobile application) ကနေ ဖတ်လို့ရပါတယ်။ Travel Tips ကဏ္ဍလေးမှာ ဖော်ပြမယ်လို့ သိရပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ ခရီးသွားစာလေးများတင်တဲ့ www.thihathetraveller.com နဲ့လည်း ချိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
WowBox အကြောင်းလေး နည်းနည်းလောက် ပြောပါရစေ။ ဒီမှာတော့ စတင်ပြီး မိတ်ဆက်ခဲ့တာ လအနည်းငယ်လောက်ပဲ ရှိသေးပေမဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ ဒီမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကို သုံးစွဲနေသူ ၁၀ သန်း ကျော် ရှိနေပါပြီ။
WowBox ဆိုတာ ဘာကြီးလဲ?
အနီးဆုံးဥပမာပေးရရင် WowBox ဆိုတာ ကိုယ်သွားလေရာ ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့အတူ အမြဲပါပြီး ကိုယ်ဖတ်ချင်တဲ့ ရသစုံခံစားမှုတွေနဲ့ သတင်းတွေကို ဖတ်ရှုနိုင်တဲ့ ဒီဂျစ်တယ်မဂ္ဂဇင်းကြီး နဲ့ အလားသဏ္ဍာန်တူပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ ကဏ္ဍအစုံအလင်နဲ့မို့ ဖတ်ရတာ ပျင်းချိန်တောင်မရနိုင်ပါဘူး။ စာမဖတ်ဘဲ ဂိမ်းကစားမယ်ဆိုလည်း ရတယ်။ ဝါသနာပါတဲ့ အားကစား နဲ့ နည်းပညာ အကြောင်းတွေလည်း စုံတယ်။ နှလုံးသားရေးရာ ဘာညာဘာညာတွေအတွက်လည်း သူ့ဆီမှာ အစုံသိနိုင်တယ်။ မြန်မာဘာသာနဲ့ပဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း တင်ဆက်ထားတော့ အားလုံးဖတ်လို့ပျော်တယ်ပေါ့ဗျာ။ နောက်တစ်ခု ကောင်းတာက နေ့စဉ် မထင်မှတ်တဲ့ လက်ဆောင်လေးတွေ ပေးတယ်။ ဆိုပါတော့ ဒီနေ့အတွက် ဖေ့စ်ဘွတ်သုံးစွဲတာ အလကားတို့၊ ဖုန်းပြောခွင့် ၂၀၀ ကျပ်ဖိုး စသဖြင့်ပေါ့ အမျိုးမျိုး စိတ်လှုပ်ရှားစရာလေးတွေ လုပ်ပေးတယ်။ တချို့ ဂိမ်းနဲ့ အစီအစဉ်လေးတွေမှာ ပါဝင်ပြီး အမှတ်တွေ စုလို့ရသေးတယ်။ များများသုံး၊ များများစု။ ပြီးတော့ အင်တာနက် Package တွေ ပြန်ဝယ်ပေါ့။ မဆိုးဘူးလေ အလကားနေရင်း အလုပ်တော့ ဖြစ်သား။ အင်တာနက်ဖိုး သက်သာလည်း မနည်းဘူးရယ်။
ဟင် ဘာရယ်? WowBox ကို သုံးတာနဲ့တင် အင်တာနက်ဖိုးက အရင်ထွက်မယ် ဟုတ်လား?
ဒါတော့ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ WowBox ကို အင်တာနက်ဘေလ် ဖြတ်တောက်မှု မရှိဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ချွင်းချက်တစ်ခုတော့ ရှိမယ်။ ဒီ App ကို သုံးနေတဲ့အခါမှာ Telenor ဆင်းမ်ကတ်နဲ့ သုံးတာ ဖြစ်ရမယ်။ ပြီးတော့ Telenor ဆင်းမ်ကတ်ကိုလည်း SIM Slot 1 (ကိုယ့်ဖုန်းက နှစ်ကတ်သုံး ဖြတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် ပြောပါတယ်) မှာ ထားရမယ်။ ဒါဆို Free သုံးလို့ရပါတယ်တဲ့။
ခရီးသွားမယ်ဆိုရင် ခရီးမှာ ဖတ်ဖို့ စာအုပ်တွေ အလေးခံ သယ်မနေတော့ဘဲ ဖုန်းလေး၊ တက်ဘလက်လေးနဲ့ WowBox မှာ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားရာ မျိုးစုံကို ရှာဖွေ ဖတ်ရှုနိုင်ပြီပေါ့ဗျာ။
Download ဆွဲကြည့်ချင်တယ်။ သုံးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်
Android ဖုန်းမှ ကြိုက်တဲ့ ကိုကို မမ တွေက ဒီအောက်က လင့်ခ် မှာ ယူပါဗျား။ Google Play Store မှာ ရှာယူလည်း ရတယ်။ အောက်ကလင့်ခ် တစ်ခုခုကို နှိပ်ပြီး ယူလို့လည်း ရတယ်။ လွယ်လွယ်လေးပါ။
iOS မှ ကြိုက်တဲ့ ကိုကို မမ တွေကတော့ ခဏလေးစောင့်ပါဦးနော်။
မကြာခင်မှာ မီးလေးဖွင့်ပြီး ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။